Araho ny morontsiraka akaiky ahy sy ny torapasika tsara indrindra 25 any Los Angeles
By Chrisking Septambra 23, 2021 Lifestyle, Travel 0 Comments
- Ranomasina akaikiko -
Ny seho amoron-dranomasina (indrindra rehefa ampy ny fivezivezenao) dia iray amin'ireo endrika manintona indrindra amin'ny faritr'i Los Angeles.
Izahay dia nametraka ny lisitry ny sasany amin'ireo toerana tsara indrindra hialana sasatra amin'ny Pasifika any amin'ny faritr'i Los Angeles, na manana alika ianao, te-hihantona glide, te-snorkel na kayak, tsy afaka mahazo trondro misambotra amin'ny surf-nao , toy ny vorona na te hilomano sy hatory fotsiny.
Ankoatra ny Hollywood sy ny fifamoivoizana, Los Angeles angamba no fantatry ny besinimaro momba ny morontsiraka.
Ny faritra Los Angeles dia mirehareha amin'ny sasany amin'ireo faritra tsara tarehy sy fanta-daza amin'ny morontsiraka, manomboka amin'ny farihy amoron'ny saikinosy Palos Verdes ka hatrany amin'ny fasika fasika any Malibu.
Ny fahitana sy ny feon'ny Venice Ocean Front Walk sy ny Santa Monica Pier dia mety ho fantatry ny mponina sy ny mpitsidika. Saingy tsy izy ireo ihany no morontsiraka any Los Angeles; izy ireo ihany no be olona indrindra.
Raha izany no eritreretina dia ireto misy torapasika 13 any amin'ny faritra mety amin'ny filomanosana, filentehan'ny masoandro, bisikileta, fitsangantsanganana, fizahana ary izay zavatra tianao atao eny amoron-dranomasina.
25 morontsiraka tsara indrindra any Los Angeles
Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo morontsiraka akaiky ahy sy ireo morontsiraka miisa 25 tsara indrindra any Los Angeles:
Làlana lavitra be mankany amin'ity morontsiraka ity, izay eo ivelan'ny sisintanin'ny Ventura County, fa ny valisoa dia amoron-dranomasina mampitolagaga sy be vato miaraka amin'ny fiposahan'ny masoandro mahafinaritra indrindra an'i Southern California.
Rehefa avy mandehandeha eny amin'ny valan-javaboary akaiky ianao dia mety milamina amin'ny onja.
2. Robert H. Meyer Fahatsiarovana State Beach
Ity dia iray amin'ireo morontsiraka akaiky ahy.
Ny morontsiraka El Pescador, La Piedra, ary El Matador dia isan'ny faritra ambany morontsiraka eo amin'ity morontsirak'i fanjakana goavambe ity.
Ity farany dia manolotra fananganana rock sy lava-bato mahaliana hizaha, ary izy telo mianadahy dia toerana tena tsara hanaovana pooling tide sy beachcombing.
3. Beach Cove Beach
Paradise Cove Beach dia moron-dranomasina tsy miankina amoron-dranomasina kely miorina ao ambadiky ny vatolampy Malibu. The Paradises Cove Beach Cafe, izay manome ny fivezivezena rehetra no nanohana ny moron-dranomasina, fa raha te hilomano na hisidina ianao dia afaka mitsidika maimaimpoana ny morontsiraka.
Betsaka ny olona tonga manofa terraces manokana, kidoro amoron-dranomasina ary lounger ary iray amin'ireo toerana milamina indrindra eto Malibu izany raha azonao apetraka aminy ny vola (mety ho 800 $ mahery ny patio manokana amin'ny andro faran'ny herinandro lafo vidy indrindra).
Raha mila tora-pasika mahafinaritra ianao handany ny fialantsasatrao, mandehana any amin'ny Paradise Bay avy any Escondido, ary amin'ny filentehan'ny masoandro dia hahazo rosé vera ianao.
4. Beach Venise
Mankanesa any Venice Beach ho an'ny antsasaky ny antsasaky ny antsasaky ny fasony aloaly izay ahafahanao manapotra lamba firakotra ary mizaha mankany Pasifika.
Azonao atao ihany koa ny mijanona ho an'ny Veney Beach Boardwalk malala, izay toerana anaovan'ny mpanao sy mpivarotra arabe ary mivarotra ny entany, mampiakatra lanja betsaka ny lehilahy hozatra, ary mivondrona ireo subcultures.
Toerana be olona io raha mitady hetsika kely amin'ny andro amoron-dranomasina izy ireo.
5. Carbon Beach (morontsirak'i Billionaire)
Ny Carbon Beach dia tsy morontsiraka manokana, fa manana ny heviny ihany. Hahita olona vitsivitsy ianao rehefa mandeha ao ambadiky ny trano be, manankarena fa raha tsy izany, ity morontsiraka lava ity dia mitokana toa an'i Malibu.
Ny rano dia mety amin'ny filomanosana satria milamina sy tsy misy vatokely izy, ary malama sy milamina ny fasika - mety tsara amin'ny fitsaharana mandritra ny tolakandro. Carbon Beach dia mety amin'ny fitsangatsanganana am-pilaminana na jogging.
Vitsy ny toerana ao Malibu izay tsy tototry ny mpizahatany, ary iray amin'ireny, ka araraoty.
Misy torapasika mitokana kokoa noho ny “Escondido“? Ity, toa ny Carbon Beach, dia morontsiraka Malibu tsy miankina miafina ao ambadiky ny trano manara-penitra izay atosiky ny mpizahatany lasa tsy fantany akory eo.
Kely kokoa ny morontsiraka eto raha oharina amin'ny any Carbon, noho izany dia tsara ny manamarina mialoha ny onja mialoha ny onja satria ny onja ambony dia mamela ny faritra kely hamelatra lamba firakotra.
Ary koa, ny fandehanana an-daniny, etsy ankilany, mahafinaritra, ary ny fitsangantsanganana avy any amin'ny Escondido Beach miankandrefana mankany amin'ny morontsiraka Paradise Cove lafo vidy dia malaza amin'ny mponina. Tsy misy toeram-piantsonana; Fa kosa, ny fiantsonan'ny besinimaro dia misy amin'ny PCH.
Ny Escondido Beach dia manana teboka fidirana ho an'ny daholobe: ny iray eo amin'ny tetezana ambonin'ny Escondido Creek ary ny iray hafa eo akaikin'ny Highway 27148 Pacific Coast.
Na eo aza ny adiny iray monja, ny ankamaroan'ny Angelenos dia tsy mahalala an'ity morontsiraka milamina sy hipetraka ao Rancho Palos Verdes ity. Ity dia iray amin'ireo morontsiraka akaiky ahy.
Miaraka amin'ny làlana fitsangantsanganana maromaro sy tahiry ekolojika fanjakana misy hantsana arovana izay manome fahitana mahatalanjona ny Pasifika, Abalone Cove dia mahafinaritra na te handray anjara amin'ny hetsika isan-karazany ianao na hiala sasatra fotsiny amin'ny fasika.
Izy io dia manana ny sasany amin'ireo tidepools any California lehibe indrindra ary lava-bato lehibe be dia be hijerena azy. Noho ny fianjeran'ny vatobe sy ny hantsana tsy miovaova etsy ambony, ny faritra amoron-dranomasina sy ny onjan-dranomasina sasany dia voasakana, ka zahao ny sari-tany raha te hahita toerana tsara ianao.
Voarara ny barbiby sy ny lelafo ary koa ny biby fiompy.
Amidy amina saka Bengal
El Pescador dia iray amin'ny harena an-dranomasina telo ao Malibu izay ahitana an'i Robert Meyer Memorial State Beach (ny roa hafa dia El Matador sy La Piedra).
Ity dia iray amin'ireo morontsiraka akaiky ahy. Izy io dia manana azy rehetra: fasika, tidepools, trano fidiovana, ary koa cove miafina fanampiny izay tsy hitan'ny mpitsidika an'io morontsiraka efa mitokana io indraindray.
Ny tsirairay amin'ireo morontsiraka telo ao amin'ny vondrona dia samy manana ny anaovany sonia, ary toerana fiantsenana voatondro (karama) atsimon'ny Leo Carillo fanta-daza kokoa. Ny farany andrefan'ny telo dia El Pescador Beach.
Fitsangatsanganana kely mankany amin'ny lalana mideza avy eo amin'ny toeram-piantsonana amin'ny 32900 Pacific Coast Highway no ilaina raha te hiditra amin'ny morontsiraka, izay lava-pasika misy feon-dranomasina.
Aondriho ny varavarankely ary manafoana ny sasany Natasha Bedingfield rehefa miala amin'ny The Hills ianao ary midina ny morontsiraka mankany Laguna Seashore.
Ilay tanàna kely sy tsara tarehy Orange Area mirehareha amoron-dranomasina fito kilaometatra, miaraka amin'ny lava-dranomasina, dobo, ranomasina, ary dobo mahazatra, na dia amoron-dranomasina be dia be aza amin'ny vintana fa mila miala fotsiny ny elo ianao ary miala sasatra mandritra ny tolakandro.
Amin'ny maha-fiandohan'ny skimboarding, hetsika toa ny mitaingina izay misy ny morontsiraka ambonin'ny rano mba hihaona amin'ny onja tapaka rehefa miditra izy ireo, dia tsy misy toerana lehibe kokoa ahazoana antsy an'io lalao mampidi-doza io - na hijerena ho mpijery pasif raha ny olona eo an-toerana asehoy ny fahaizany.
Hamarino tsara fa misy roa heny raha hijery fitsipika, satria ny morontsiraka tsirairay dia samy manana ny fandaharany momba ny fampiharana azo atao. Ity dia iray amin'ireo Track Beaches akaikiko.
Bow Narrows dia morontsiraka eo akaiky eo malaza izay ahitanao tombo-kase miala sasatra 100 metatra amoron-dranomasina eo amin'ny Seal Rock, ary fitsambikinana, fitsambikinana scuba, fivezivezena amin'ny vatana, fisidinan'ny rano, ary fanazaran-tena samy hafa no avela.
Thalia Road no safidy tsara indrindra amin'ireo mpizaka tany, fa kosa ny Wood's Bay sy Darling's Inlet dia manana rano lalina mety tsara hitsambikinana sy hanaovana fanadihadiana momba ny onjan'ny onja.
Fantatry ny ankamaroan'ny Dark's Seashore ao La Jolla, San Diego, ho iray amin'ireo morontsiraka vao teraka i California Rincon Avaratra (antsoin'ny olona eo an-toerana hoe Bates Seashore) dia milamina hafa ahafahanao manary ny tsipika taninao, na manararaotra onja ankavanana izay mahatonga ity morontsiraka ity ho toerana mitaingina tsara indrindra eo amin'ny moron'ny Focal.
Ny morontsiraka telo kilaometatra dia tena voafetra sy marokoroko amin'ny faritra sasany, koa mankanesa any amin'ny lalana mankany amin'ny Rincon Park District Seashore raha tianao ny fasika kokoa.
Somary lavitra kokoa ny morontsiraka ny Carpinteria Feigns Nature Reserve izay ahafahanao mitrandraka ny lalana sy ny Carpinteria Seal Safe-haven Overlook izay ahitanao ny tombo-kase milentika ao ambany.
Ireo voajanahary dia niady tamim-pahavitrihana mba haharaka ny fizotran'ny fahalinan'ny akanjo eny amoron-dranomasina ary tamin'ny taona 2017, ny Office Parks Office sy ny Sheriff Area dia nanaiky ny hiala amin'ny fanakanana ireo nudist raha tsy hoe misy fitarainana.
Ny marika "No Bareness" dia manisy sombin-javatra sisa tavela amin'ny tendrony avo indrindra amin'ny morona izay manosika ny moron-dranomasina, nefa manodidina ny 1,200 metatra mankany andrefana ianao dia hanaraka famantarana iray hafa izay mampitandrina fa "Miditra amin'ny faritra mifehy ny fitafiana ianao," izay manondro ny fiandohan'ny faritra notohanan'izy ireo.
Tsy ny olon-drehetra no mahatakatra fa ilay cove kely mangina ao aoriana Terranea Resort azo idiran'ny besinimaro koa.
Ny moron-dranomasina dia maotina ary azo aleha amin'ny alàlan'ny dia an-tongotra manaraka ny hantsana, saingy satria manome seza ny toeram-pialan-tsasatra, dia mety ho tonga tsy mitondra na inona na inona ny olona ary ho afa-po.
Ary koa, ny manintona lehibe indrindra dia ny zohy an-dranomasina, izay mety ho sarotra ny tratry ny ankizy kely, fa ny fiakarana mahavariana amin'ny vatolampy amin'ny fihenan'ny rano ho an'ny ankizy lehibe.
Azo apetraka ho an'ny besinimaro ny fijanonana amin'ny alàlan'ny karama misy sora-baventy amin'ny havia voalohany amin'ny Terranea Way. Dia an-tongotra kely mankany Terranea Cove avy eo.
Ho antsika izay mety ho somary reraky ny hafanana, morontsiraka avaratra toa Oxnard dia nofinofy. Amin'ny ankabeazany, zavatra toy ny mangatsiatsiaka 15 degre ary malalaka ny angovo.
Fiara adiny iray monja avy any LA, misy zavatra mahafinaritra be dia be azo atao any Oxnard, manomboka amin'ny fanofana ski mankany amin'ny fitsangantsanganana mamaky ny Nosy Channel — izay Ranomasina amoron-dranomasina Oxnard manomeza fomba fijery any an-danitra.
Mihevitra ny hanofa trano amoron-dranomasina mandritra ny faran'ny herinandro any amin'ny toerana iray? Hahita amoron-dranomasina be dia be ianao manamorona ny morontsirak'i Oxnard, na izany aza, i Oxnard Seashore mihitsy no mety ho loka.
Mahavariana tanteraka ny onjany eto, ary eo akaikin'ny vavonin'omby efa voaroaka tsara any amin'ny Park Oxnard Seashore Park, izay miavaka amin'ny fitsangantsanganana, sidina manidina, fiompiana eny amoron'ny fasika, ary mitazam-pandrika ireo kaninin'ny hafa.
Ny fijanonana dia be kopia sy maotina, amin'ny $ 5 mandritra ny andro (vola). Azonao atao ny mitondra ny kanininao raha mbola anaty rojo izy, ary satria i Oxfordnard Seashore dia eo amin'ny làlan'ny bisikileta amorontsiraka Pasifika, dia toerana mendrika hitondra bisikiletanao izany.
Ilaina ny famandrihana ho an'ny piknikzy amboara, ka antsoy izy ireo (amin'ny 805-385-7946) hisambotra toerana iray.
Iray amin'ireo torapasika malaza indrindra ao amin'ny faritr'i Greater Los Angeles dia Santa Monica. Ny morontsiraka fasika lava sy fotsy misy azy dia mamaritra azy sy Annenberg Community Beach House, ary be olona sy hetsika miaraka aminy foana izy io.
Roller coaster, Segways, pancakes, ary hotely lafo vidy dia hita eny amin'ny Santa Monica Beach, izay mirehareha koa amin'ny fasika fotsy tsara indrindra eto an-tany.
Tsy mitady ianao raha tsy mahita zavatra hatao ao. Ity dia iray amin'ireo morontsiraka akaiky ahy.
Ity morontsiraka tsy manara-penitra ity dia ankafizin'ny olona eo an-toerana, noho ny fahazoana azy mora, ny fijanonana an-dalambe maimaim-poana ary ny fahitana azy amin'ny carte postales.
Raha ampitahaina amin'ireo moron-dranomasina mifanila aminy, dia toerana tsy lavitra eo alohanà toerana misy vavahady tsy miankina izay mitazona ny valalabemandry, mamela ny andro amoron-dranomasina milamina tsara.
Sunset Beach dia manolotra trano fidiovana sy mpiambina, fa tsy misy sakafo hafa ankoatry ny entinao ao anaty cooler-nao. Na dia Huntington Beach aza no tanàna akaiky azy indrindra, Sunset Beach no tanàna kely tsy misy mpanoritra ao aminy Orange County.
Eo anelanelan'ny Anderson Street sy Warner Avenue, andrefan'ny Pacific Avenue no misy ny torapasika.
Taorian'ny fotoana maharitra an'ny Dockweiler may mafy ny afo, ny sasany farany tafaverina amoron-dranomasina ary azo ampiasaina. Ity dia iray amin'ireo morontsiraka akaiky ahy.
Tsy fahita firy ny hain-trano any Los Angeles ary ny fidiran'izy ireo ao Dockweiler dia fampitaovana tokana manasaraka ity moron-dranomasina ity - manome antoka fotsiny ny hametahana ny toeranao ara-potoana satria hiakatra tampoka izy ireo amin'ny ankapobeny.
Raha mitady fitsapana ianao dia ento mivoaka ny lalao bar-b-que any aminao — mitondrà hena avy any Belcampo eny am-pandehanana, ary manamboara barbecue malaso eo ambony afo.
Tsy avela any Dockweiler ny zava-pisotro misy alikaola, ary ho hitanao fa misy mpitsangantsangana polisy maromaro misosasosa.
Tsy azonay atao mihitsy ny manohitra ny fenitra, izay milaza fa tsy afaka mamporisika anao handrombaka kaopy sakafo tsy lafo akory izahay alohan'ny hisehoanao sy hametahana azy ireo amin'ny tsiranoka mifanaraka amin'ny safidinao, ka hahatonga azy io ho sarotra kokoa ho an'ny fampiharana lalàna mihoapampana.
Tsy misy antony tokony hamporisihantsika izany amin'ny fotoana rehetra. Kely dia kely ny akaikin'ny Dockweiler (afa-tsy raha manandrana misakafo any Remiss ianao), ka dia ho lasa BYO Cookout andro io.
Valan-javaboary Leo Carrillo dia toerana misy tontolo iainana misy hantsana mideza, renirano Malibu handehanana, ary rano madio misy dobo maro. Ity dia iray amin'ireo morontsiraka akaiky ahy.
Izy io dia paradisa ho an'ny surf, ny mpilomano, ny lounger amoron-dranomasina, ny mpitsangatsangana an-dranomasina, ny mpanjono mpanjono ary ny mpikaroka ny sela amoron-tsiraka izay miorina amin'ny 1.5 kilometatra amin'ny morontsiraka mety.
Ny lasy amoron-dranomasina fialofana amin'ny hazo sycamore goavam-be no mety ho ampahany lehibe indrindra nefa ny rano Leo Carrillo dia azon'ny vahiny rehetra.
Zavatra tsara hatao any Tennessee
Zavatra tokony hatao ao Pigeon Forge
Toa tanjon'i Malibu mitaingina lohany, Zuma's ny karazana olona avy amin'ny sarin'ny Midwest rehefa mihevitra ny moron-dranomasin'i Los Angeles izy ireo- dia nitifitra Baywatch taonina maro teto.
I Zuma angamba no morontsiraka lehibe indrindra amin'ny LA manontolo, ka na eo aza ny lazany dia tokony hanana safidy ianao milentika ao anaty famaritana mendrika; Toy izany koa no ahitanao an'i Point Dume, fikafika mahatalanjona miraikitra amin'ny ranomasina.
Raha mpihanika vato ianao, dia miakara any an-tampon'ny tampon'ny liona an-dranomasina, araka ny tokony ho izy. Betsaka ny fijanonana, na izany aza, noho ny resabe nataon'i Zuma momba azy io dia mety ho lafo kokoa noho ny morontsiraka isan-karazany - ny vidin'ny fahavaratra dia mety hahatratra 10 $ ny tolakandro (ary tsy avela hijanona mandritra ny alina).
Aza hadinoina ny mitrandraka ny tombony, na izany aza, fa tsy trano fidiovana, trano fandroana, ary kianja volleyball no mahatsiravina.
Na dia mijanona eo amin'ny iray na amin'ny morony amoron-dranomasina aza ny fitoeran-tsakafo, dia mila manomboka (na mifarana) any amin'ny Malines Wines ny andro Malibu miavaka - io no haavon'ny kalitao tsara indrindra amin'ny fisotroana andro any Los Angeles.
Mampamirapiratra tanteraka ny tany, ary vao mainka mihasimba ny mpanjifa. Na amin'ny lafiny iray hafa ankolaka izay tianao ny manandrana divay sy misolelaka amin'ny tsiranoka vaovao eny an-tsena miaraka amoron-dranomasina ho toy ny zavatra niainanao, dia mankanesa any amin'ny Malibu Ranch Restaurant ao amin'ny Dock Malibu.
Ity zaridainam-baravarana ambany ity misy fasika ampy hamelarana azy dia eo avaratry ny Piera Santa Monica ihany. Ary koa, ity dia faritra tena tsara filomanosana, fitsangatsanganana, na filalaovana volley (be ny harato eto).
Manomboka koa ny làlan'ny bisikileta Marvin Braude 22 kilaometatra, koa ento ny cruiser amoron-tsiraka (na manofa iray) hijerena ny morontsiraka. Ity dia iray amin'ireo Track Beaches akaikiko.
Mikasa ny hiala amin'ny vahoaka? ny faritra atsimon'ny Jetty Topaz dia toerana iray fandroana masoandro milamina amin'ny morontsiraka atsimon'i California.
Kely ny fampitaovana, fa raha te-hustle kely ianao, dia lavitra ny lalan'ny Redondo Beach Pier, izay nifanaovan'i Dennis Wilson sy Mike Love tany am-boalohany ny hamorona hira momba ny onja.
Ary koa, ny morontsiraka dia azo aleha amin'ny alàlan'ny dingana maromaro ho an'ny besinimaro ao Topaz sy Esplanade.
Rosie's Canine Seashore, faly izahay milaza fa tena io no noeritreretininao azy. Tsy misy tady tanteraka, ho hitanao ao amin'ny habakabaka Belmont Shore any Long Seashore izany.
Rosie's plays bunches of fun canine fun fotoana koa, ka na oviana na oviana na fotoana inona ianao dia tonga soa amin'ny Facebook ho an'ny zavatra toy ny “Corgi Seashore Day,” mety tsara fa tamin'ny an'i Rosie io. Tsy isalasalana fa ny toerana voalohany ahafahanao mandray anjara amin'ny canine mando.
Ny ora ho an'ny canine dia amin'ny 6 maraina – 8 hariva, noho izany, ny namanao akaiky indrindra dia tsy mahazo alalana amin'ny morontsiraka ivelan'io fotoana io.
Fanampin'izany, jereo fa tsy voafefy ny moron-dranomasina, ary tadidio fa misy kitapon-java-bary azo alaina avy amin'ny kaontenera, mahaliana ny mitondra anao.
Long Seashore, izay tena distrikan'ny LA, dia manana pummels mahavariana ao amin'ny birao fisakafoanana sy fisotroana.
Izay maniry ny sakafo Meksikana dia tokony hitarika anao any amin'i Lola: dokam-barotra mahagaga izy io, nefa mendrika izany noho ny fahitana fa mahavariana ny sakafo. Ity dia iray amin'ireo Track Beaches akaikiko.
Ny alin'ny alina amin'ny tsara tarehy saika sarotra ny manakatra azy, ary azonao atao ny mamoaka azy ireo eo an-tsisin'ny lavarangana lava - ento ny olona tianao, ary azonay antoka fa afaka hanao fanambarana izay handeha tsara.
Hermosa Cyclery dia toerana tsy mampino hanombohana ny andronao raha sanatria ka ao an-tsainao ny manofa bisikileta vitsivitsy ary mandray anjara amin'ny fitsokan'ny ranomasina.
Raha toa ianao ka mpankafy volley-ball na tenisy amoron-dranomasina dia manana fitsarana ho anao i Hermosa.
Miezaha tsy manantena ny Hermosa Seashore Dock mba hitovy amin'ny an'ny Santa Claus Monica Wharf - tsy misy mitaingina sy manintona eny akaikin'ny sisiny eto, seranan-tsambo kely fotsiny izay manao fomba fijery miavaka rehefa milentika ny masoandro.
Hermosa dia tsy misy setroka, izay midika fa ny fifohana sigara sy vaping (tsy mampaninona anao izany sigara anao izany) dia tsy avela hiditra amin'ny toerana malalaka rehetra.
Hermosa Seashore dia feno sakafo sy zava-pisotro voalohany, indrindra ny Baran's 2239 (andramo ny atody Indiana), Barsha (ampiarahana divay fotsy manome aina ny Lazazavavy), ary Palmilla Cocina Y Tequila (makà margarita kôkômbra jalôra ary mizaha fatratra amin'ny ranomasina).
Ho an'ny loharanom-pahalalana iray manontolo ho an'ny fepetra takiana aminao rehetra, kitiho ny Abigaile: manomboka ny toerana toy ny distillery sy ny trano fisakafoanana rihana voalohany, ary mivadika ho dihy mitafo ambony tampony. Ity dia iray amin'ireo morontsiraka akaiky ahy.
The Huntington City Beach no morontsiraka malaza indrindra amin'ity halavany ity, napetraka ao anatin'ny valan-javaboary 121 hektara izay natsangana tamin'ny 1942 ary manarona ny tampon'ny Orange County.
Fantatra amin'ny fialan-tsasatra fialan-tsasatra, Tranombakokan'ny onja mitanjozotra iraisam-pirenena, ary andro aman'alina. Misy fivarotana fivarotana maromaro izay ahafahanao manofa solaitra na mividy lamba famaohana, ary koa trano fisakafoanana, trano fisotroana labiera, labiera eto an-toerana ary seranan-tsambo mahafinaritra.
Na dia tsy eo amoron-dranomasina aza izany dia tsy hitandrina ianao raha tsy manandrana an'i Normita's Surf City Taco, toerana tena tianao.
Tsy tokony hatao outshone amin'ny Hermosa, Ranomasina Manhattan dia hanasongadina alokaloka adala amin'ny fizarana amin'ny alina.
Mora ny manomboka andro iray amin'ny fampihetseham-batana eto, miaraka amin'ny Marvin Braude Bicycle Trail, Polliwog Park (toerana mahafinaritra ho an'ny golf golf), ary ny Sand Rise Park, izay toa izany.
Ny olona mampiasa ny hantsana goavambe ho an'ny fanatanjahan-tena, na izany aza, fantatrao fa inona no fotoana tsara kokoa noho ny fanatanjahan-tena (ankoatry ny zava-drehetra)? Sandboarding.
Miaraka amoron-dranomasina roa kilaometatra sy toerana fijanonana eo amin'ny 500 eo ho eo, avo dia avo ny mety ho azonao amin'ny andro iray azo ekena.
Ny morontsiraka South Straight dia tsy ny fipoahan'ny indostrian'ny fizahan-tany izay ho hitanao any St Nick Monica sy Venice, kanefa mety ho io ilay zavatra tadiavinao.
Toerana fisakafoanana / fisotroana: Tompondakan'ny sakafo maraina tsy ara-potoana ny Manhattan Seashore Post, miaraka amina horonan-tsakafo cheddar bacon sy steak zipo chimichurri ampy handresena ny aretin'andoha. Raha feno izy ireo dia tsy maintsy misy ny Fishing With Dynamite, noho ny mety ho bara fitondra-tena tsara indrindra eto an-tanàna.
Point Dume dia eo amin'ny tendrony atsimo indrindra amin'i Malibu, eo amin'ny hantsam-bato izay mivoaka mankamin'ny Pasifika ary midina mankany amoron-dranomasina miendrika felana mahafinaritra.
Mazava be ny rano, mahatonga azy io ho faritra mahafinaritra hilomanosana amin'ny andro fahavaratra mafana, ary koa toerana scuba tsara ahafahanao milomano amin'ny liona an-dranomasina.
Ary koa, ny moron-dranomasina dia fanta-daza amin'ny toerana tena tsara hianarana hianika vato. Misy zavatra kely ho an'ny olona rehetra ao.
Ilay matador dia ilay karazan-dranomasina izay hitondran'ny Angeleno anao raha vantany vao tonga any amin'ny seranam-piara-manidina ianao.
Tany mahavariana voajanahary, milevina amin'ny tohatra miolakolaka miaraka amina vatolampy manjelanjelatra izay toa nipoitra avy tany Pasifika, ary koa ireo dobo-drano izay manome zahana ireo mpiara-mitory amin'ny ranomasina amintsika.
Raha manapa-kevitra ny hitsidika azy ireo haka sary ianao na hijery fotsiny, dia mitandrema mba hanao kiraro rano fa mety malama ny vato. Tsy manana serivisy na fotodrafitrasa i El Matador satria harena voajanahary.
Ho vonona amin'ny andro ianao raha mitondra lamba famaohana amoron-dranomasina, fandroana masoandro ary kojakojan'ny piknik.
Zavatra tokony hatao any Orland, FL
Toerana mahafinaritra 10 hotsidihina amin'ny volana oktobra
Zavatra tokony hatao any DC amin'ity faran'ny herinandro ity
Toerana mahafinaritra indrindra eto an-tany
Jereo, ny safidintsika ho an'ny moron-dranomasina tsara indrindra any Los Angeles sy ny manodidina, miaraka amin'ny torohevitra momba ny fomba hanararaotana ny rehetra.
Andro fahatsiarovana dia manondro ny fiandohan'ny fahavaratra tsy ara-potoana any atsimon'i California, izay milaza fa ny vanim-potoana amoron-dranomasina dia mandeha haingana ankehitriny.
Inona koa, eto LA, izay tsy sarotra ny mangataka andro mamirapiratra raha ny marina, manana safidy betsaka isika rehefa tonga ny fotoana handrafetana ny fiainanao sandy manaraka.
Araraoty ary ny morontsirakay malala-tanana miaraka amoron-dranomasina tsara indrindra ho an'ny fitehirizana, fanaovana surf, filomanosana, na filentehan'ny masoandro fotsiny amin'ny fasika. Manome toky izahay fa hiova ianao amin'ny farany mifanaraka amin'ny mari-pana mangatsiaka avy amin'ny Ranomasina Pasifika, indrindra amin'ny volana alohan'ny fararano rehefa tsy mahazaka ny hafanana maina.
Etsy ambony no misy ireo teboka amoron-tsiraka izay ilainao hikapohana an'i Los Angeles sy ny manodidina, ary ireo toerana tokony hohaninao rehefa eo ianao. Manantena fa tianao izy ireo.
Masìna ianao, avelao ny fanehoan-kevitra, toy ity lahatsoratra ity eo amin'ny morontsiraka akaikiko, ary lazao amin'ny namanao sy ny fianakavianao izany!
Tags:misokatra ny morontsiraka ao los angeles, morontsiraka akaikiko, morontsiraka tsara indrindra any la, morontsiraka laguna, long beach, morontsiraka Venise
Hafatra fampiononana ho an'ny boss: Fomba 65 hanehoana fangorahana amin'ny boss anao
Mandra-pahoviana ny ahitra mijanona ao amin'ny rafitrao? Inona no mitaona ny fahitana?
Mividy / mivarotra kaom-bola ve ny CVS? Ahoana no fomba ahazoana azy ireo ao amin'ny pharmacy CVS
Kiraro Nike tsara indrindra amin'ny mandeha, mihazakazaka na ho an'ny mpitsabo mpanampy izay mijoro mandritra ny tontolo andro
Ranomasina tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao sy ireo Nosy Karaiba Mahagaga amin'ny fialan-tsasatra
Deodorants tsara indrindra ho an'ny lehilahy ary AntiPerspirants Mahagaga mba hijanonana ho vaovao
Exfoliator tsara indrindra amin'ny tarehy sy ny hoditra rehetra ary ny tombontsoany mahatalanjona
Thriller tsara indrindra amin'ny Netflix sy horonan-tsary 25 mampiahiahy indrindra hijerena